Olee otu Nnyocha Isi Mere Eme Branddị intolọ Ọrụ Ndi Isi | Martech Zone
Olee otu Nnyocha isi na-eme ka ụdị dị iche iche ghọọ ndị isi ụlọ ọrụ
Tọzdee, Disemba 5, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa agbanyela na ọdịnaya ọdịnaya, mgbasa ozi mmekọrịta, mgbasa ozi nke obodo na ọtụtụ usoro ịzụ ahịa ndị ọzọ iji wulite mmekọrịta na ndị na-ege ha ntị. Ndị ọkachamara n’ahịa na-achọkarị usoro na atumatu ọhụrụ iji wulite ikike na njirimara nke ika ha. Otu ụzọ pụrụ iche nke ọtụtụ ụlọ ọrụ gosipụtara ọnọdụ ha dịka ndi isi ulo oru bụ site na ịmepụta pụrụ iche nnyocha mbụ nke ahu bu ihe kwesiri ekwenye ma bara uru nye ndi n’agu ha.
Nkọwa Nchọpụta Isi: Ozi na-abịa kpọmkwem site na isi iyi – ya bụ, ndị ahịa nwere ike. You nwere ike ikpokọta ozi a n'onwe gị ma ọ bụ were onye ọzọ iji kpokọta gị ya site na nyocha, otu ndị na-elekwasị anya na ụzọ ndị ọzọ. Nkọwapụta nke ndị ọchụnta ego
Janna Finch, Onye Nchịkwa Njikwa na Ndụmọdụ Sọftụwia, otu ụlọ ọrụ nyocha nke na-enye nyocha efu nke sọftụwia ịzụ ahịa, na nso nso a mepụtara akụkọ nke ahụ na-enye ihe atụ anọ nke ụlọ ọrụ ndị jiri ya nnyocha mbụ dị ka atụmatụ akara ngosi dị irè. Anyị kpebiri ịchụkwudo Finch ma hụ ozi ndị ọzọ ọ ga-ekerịta banyere iji usoro a. Nke a bụ ihe ọ ga-enye:
Kedu otu nyocha mbu nwere ike isi wuo ikike nke ika?
Ndị na-ere ahịa maara na ibipụta ozi a na-ekenye ya ugboro ugboro ezughi iji bulie arụmọrụ ọchụchọ ma ọ bụ mepụta ọgụgụ nke na-eduga na ntụgharị. Nke a abụghị usoro nri maka ihe ịga nke ọma, ọ gaghịkwa ọdịiche dị n'etiti ika gị site na ụdị ndị ọzọ.
Ọdịdị dị elu, ọdịnaya mbụ bụ nnukwu ụzọ iji bulie mkpọtụ nke ndị asọmpi gị na nyocha mbụ dabara nke ọma na ụgwọ ahụ. Nchoputa mbu, mgbe emezuru ya nke oma, n’enye gi olile anya ihe di iche nke puru iche n’enweghi ebe ozo n’ihi na ohuru.
Lishkwusa nyocha nke mbụ nwere nnukwu uru:
Ọdịnaya na-akọrọ: Ndị mmadụ na-achọ ihe ọhụụ ma na-atọ ụtọ ma na-ezere ọdịnaya e kesara ọtụtụ narị ugboro na ntụgharị dịtụ iche. Nnyocha mbụ nwere ohere dị mma nke ịbụ ihe na-atọ ụtọ ma bara uru, nke pụtara na ndị mmadụ ga-enwe ike ịnwe ya, dị ka ya, tụgide ya ma ọ bụ blọọgụ banyere ya.
It na-eme ka ikike gị pụta ìhè na isiokwu: akwalite ọrụ nyocha bụ isi abụghị ọrụ dị mfe. Ọ chọrọ ọtụtụ mmadụ ọtụtụ awa na nraranye. Ndị mmadụ mara nke a ma mara na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị dị oke mkpa ịmalite nnukwu ọrụ nyocha, ikekwe ị nwere ikike n'okwu a.
Iwuli ikike nwekwara Ihe SEO pụtara. Ka ndị mmadụ na-atụkwasị obi gị ika ma na-asọpụrụ ọdịnaya gị, otú ahụ ka ihe gị ga-ekekọrịta ma jikọta ya. Nchọpụta ọchụchọ na-ekpebi na ọ bụrụ na ị na-ekerịta ọdịnaya nke ọma, mgbe ahụ ọ nwere ike bụrụ akụ bara uru. Ọ bụrụ na Google na-ahụ mmekọrịta a na ọdịnaya gị, akara gị ga-ebu ikike karịa wee malite ịpụta elu na SERPs ma ọtụtụ ndị ga-eleta saịtị gị. Ọtụtụ ndị ọbịa na-apụtakarị mgbanwe ndị ọzọ.
Kedu ihe kpatara iwulite akara ngosi na ịntanetị dị oke mkpa maka azụmaahịa?
Ndị mmadụ na-achọ ụlọ ọrụ n'ihi na ha tụkwasịrị obi na akara ha, ma ọ bụ na ha na-enye ozi ha na-achọ, ma ọ bụ na ha enweela ahụmịhe gara aga. Site n’iwulite ikike ichoro ika, igha enwekwa ntụkwasị obi. Mgbe ndị mmadụ tụkwasịrị ụlọ ọrụ gị obi ma lee gị anya dị ka onye ndu, ọ nwere ike mechaa duga na ndu na ntinye ego.
Nke a dị mkpa na Internetntanetị. Ka ikike gị na-enwetakwu ikike, o yikarịrị ka ọ ga-ebuli elu na nsonaazụ ọchụchọ. Ọdịmma azụmahịa gị dị elu na peeji nsonaazụ ọchụchọ Google, nke a na-ahụwanye akara gị, na ọhụụ ka ukwuu pụtara ịnweta ego. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọ dịghị onye zụtara ihe na weebụsaịtị nke ha na-agaghị achọta.
Enwere ihe atụ nke ika nke mejuputara usoro ahia a nke ọma?
E nwere ụlọ ọrụ dị iche iche ejirila nyocha mbụ rụọ ọrụ nke ọma iji wuo ikike nke akara ha. Otu ụlọ ọrụ ọfụma rụzuru atụmatụ a - Moz. Moz bụ ikike na njikarịcha njin ọchụchọ (SEO) ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri. Agbanyeghị, iji gbalịa ijigide ọnọdụ ha dị ka onye isi na-aga na-isi mmalite maka akụ SEO, ha onwe ha kwa na-ele anya nyocha mbụ.
Moz nyochara ihe karịrị 120 ndị ahịa SEO kachasị elu iji kpokọta echiche ha banyere ihe karịrị 80 njikwa ogo engine. Moz chịkọtara data na mepụtara eserese na-agụ ọgụgụ na nchịkọta data maka oke ịgụ na oke. Mkpebi ha ịgbanye na nyocha mbụ bụ ihe ịga nke ọma n'ihi na ha nyere ndị na-ere ahịa SEO nyocha bara uru ma kwenye na ọ nweghị onye ọzọ nwere ike ịnye. Mgbalị a rụpụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njikọ 700 na ihe karịrị mmekọrịta mmadụ na 2,000 (ma na-agụta!). Kinddị ọhụhụ a abụghị naanị na ikike ikike ha na-abawanye, kama ọ na-emekwa ka aha ha sie ike dịka isi iyi ama ama nke ozi SEO na omume kacha mma.
Kedu aro ị nwere maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-atụle iji nyocha mbụ iji wuo ikike akara ha?
Ghọta na imepụta ezigbo nyocha mbụ na-ewe nnukwu oge na mbọ. Dị ka nnukwu ọrụ ọ bụla, atụmatụ na atụmatụ dị oke mkpa. Ndị a bụ ajụjụ ole na ole ị kwesịrị ịjụ onwe gị tupu ịmalite ịchịkọta data:
Kedu ihe m chọrọ ịchọpụta?
Kedụ ka m ga-esi nweta ụdị ozi a? Jụọ onwe gị ma ụzọ kachasị mma iji chịkọta data ahụ bụ ịmepụta nyocha a na-ekekọrịta, ma ọ bụ ịgba ajụjụ ọnụ obere ndị ọkachamara, maọbụ ọ bụrụ na ịnwere ike ịnakọta data site na nyocha nke gị.
Kedụ ka nchọta ọrụ a ga-esi baara ndị ahịa m ma ọ bụ ndị na-ege m ntị uru? Nwere ike ịgafe mmegharị niile na ịrụsi ọrụ ike nke ịchịkọta data dị mma, mana ọ bụrụ na ọ baghị uru, na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe ịkekọrịta, kedu ka ọ ga - esi nyere aka wulite ikike gị?
Ọ bụrụ na ị lebara ajụjụ ndị a anya, ị gaferelarị ọtụtụ ndị asọmpi gị.
You nwetụla mgbe ị jiri nyocha mbụ iji bulie ikike nke ika gị? Biko kọọrọ gị akụkọ gị ma ọ bụ kwuo n'okpuru.
Tags: Janna FinchikeNnyocha Ahịa Primarynnyocha mbụresearchndụmọdụ ngwanrọ
WordPress: Ebumnuche 3 Wụnye Jetpack Ugbu a!
Dị ka Eburu amuma, 2013 Ezumike Ezumike gara Mobile